MACLUUMAADKA TARANKA EE PULI DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka ee Puli Dog iyo Sawirro
Naopleon the Hungarian Puli oo 8 jir ah— 'Naopleon waa reer Hungary Puli oo leh akhlaaq xumo iyo jacayl aad u weyn inuu jiifsado. Gaar ahaan caqli badan, wuxuu soo qaataa labo kabood, xadhigiisa, iyo xirmooyinkiisa uu ku xiro ee amarka ka hor inta uusan isu diyaarin socodka. - Sawir qadarin ah David Hancock
Eyga Biyo Hungary
Puli (Pulik. Jamac) waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, is haysta, oo eey u eg afar gees leh isla markaana leh jaakad gaar ah oo xadhig leh. Jidhku waa laf-dhaban yahay laakiin waa murqo muruqsan. Madaxa gumaarku waa u dhigmo jirka. Madaxa dhinaca waa inuu noqdaa mid ukun eg, halka xagga hore uu ka muuqan doono muuqaal wareegsan. Dabada waa inay si dhab ah dhabarka ugu xirtaa. Indhuhu waa qaab yicib iyo midab madow oo midabkeedu mugdi yahay. Dhegaha waa midab dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah waa inay ahaato madow. Koodh buuxa oo dadka waaweyn ah ayaa dhulka gaadhi kara. Midabada qaar looma ogola wadamada qaarkood, laakiin UK mugdi ah, hoos kasta oo cawl, abrikot (leh ama aan lahayn waji madow) iyo kuwa cad ee dhifka ah dhammaantood waa la oggol yahay.
Puli waa eey yar oo firfircoon, faraxsan oo aad daacad u ah. Waa qoys aad u fiican xayawaanka rabaayadda ah oo la qabsan doona inta badan hareeraha iyo duruufaha. Caqligeeda lagu dhasho ayaa sahleysa in la tababaro. Haddii Puli uu dareemo milkiilayaasheeda inay yihiin ma ahan maskax adag sida lafteeda, way samayn doontaa noqosho kasbasho iyada oo leh maskax u gaar ah, maadaama ay rumaysan tahay inay u baahan tahay inay samaysato xeerarkeeda u gaarka ah ee guriga. Pulik wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa adeecida iyo kacdoonka iyo waliba giraanta bandhiga. In kasta oo ay ka feejigan yihiin shisheeyaha, haddana weligood ma ahan kuwa dagaal badan, laakiin waxay si fiican u bixin karaan digniin cod ah haddii ay dareemaan hanjabaad milkiilahooda. Pulik laguma talin karo carruurta yaryar ee ku maadsami kara ama kula kici kara iyaga. Carruurtu waxay u baahan yihiin in la baro sida loo noqdo hoggaamiyeyaasha xirmada . Waa muhiim inaad barato sida loo sameeyo si habboon ula xiriir eygaaga .
Dhererka: Ragga 16 - 17½ inji (41 - 46 cm) Dumarka 14½ - 16 inji (36 - 41 cm)
(U.K heerka waxyar ka weyn Mareykanka)
Miisaanka: Ragga 25 - 35 rodol (11 - 16 kg) Dumarka 20 - 30 rodol (9 - 14 kg)
Puli waa nooc aad u adag. Dhammaan soosaarayaasha sumcadda leh ayaa tijaabin doona keydkooda ku saabsan miskaha dysplasia waxayna baaritaan ku sameyn doonaan indhaha, in kastoo aysan jirin dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn oo lagu yaqaan noocyadan.
Puli waxay la qabsan doontaa ku dhowaad xaalad kasta, ha noqoto guri dabaq ama beer. Noocani wuxuu ku habboon yahay dhammaan cimilada. Kulaylka Australia iyo Florida waxay si aad u wanaagsan u qabataa oo, liddi ku ah qabowga daran ee meelaha sida Denver jiilaalka sidoo kale sidoo kale waxay qabataa. Waa mid si firfircoon uga dhex shaqeeya gudaha isla markaana hagaagi doona bilaa daarad.
Pulik wuxuu ubaahanyahay a socod maalinle ah ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaaminta, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Eeyahaani waa kuwo firfircoon oo firfircoon waxayna ku jiraan sharaftooda marka loo oggolaado inay wada ciyaaraan oo ay ciyaaraan, gaar ahaan haddii milkiilahooda ama ey ey la socdaan ay ku soo biiraan madaddaalada. Qaarkood waxay jecel yihiin biyo waxayna u dabaalan karaan si aad u wanaagsan, laakiin dhammaantood maahan inay u janjeeraan tanna marna looma oggolaan karo in aan lala socon.
Qiyaastii 12 sano ama ka badan
Koodhka xadhkaha leh wuxuu bilaabmaa inuu sameysto qiyaastii da'da 6 bilood, marka dhogorta jilicsan ee dhogorta leh ay dhex gasho jaakad ka baxsan. Gogosha sidaas lagu sameeyay waa in si joogto ah gacanta loogu kala saaraa marxaladdan. Buruqyada waa in lagu kala jeexjeexaa gacanta min caarada ilaa maqaarka. Koodh kasta waa shaqsi laakiin sida hage adag, qaybahaas waa inaan laga dhigin kuwo ka khafiifsan ballaca qalin. Waa nidaam nasasho iyo raaxo leh eeyga iyo milkiilaha oo haddii si joogto ah loo sameeyo, waxay qaadataa waqti yar. Haysashada xarig buuxa oo Puli waa mid aad u fudud tan iyo markii ay taxaddar yar yeeshaan marka laga reebo kala-goynta jaakada caadiga ah iyo, dabcan, maydhashada. Qubaysku waa u fududahay sida dhaqitaanka funaanad laakiin qalajinta waqti ayey qaadataa. Qalajiyaha, jaakad si buuxda u xadidan oo Puli ah ayaa qaadan doonta dhowr saacadood qalajina la'aantiina waxay qaadan kartaa ilaa 2 maalmood in ay si buuxda u qalasho. Indhaha iyo dhagaha waa in si joogto ah loo nadiifiyaa ciddiyaha oo la jarjaraa. Taranka ma daadiyo jaakadiisa. Haddii aad xasaasiyad ku leedahay eeyaha guud ahaan, waxaad isku dayi kartaa inaad aragto sida aad ula jaan qaadi karto Puli maaddaama jaakaddiisu aad u kala duwan tahay. Bixiye wanaagsan ayaa kuu oggolaan doona inaad booqato dhowr jeer adoo horay u sii qorsheeyay si aad u aragto sida eeyahoodu kuu saameynayaan ka hor intaadan ka fikirin inaad horay u sii wado eey.
Nooc qadiim ah, Pulik wuxuu ka gudbay bannaanka Hangari iyadoo ay lajireen Magyars dhowr kun oo sano kahor halkaas oo loogu adeegsan jiray eeyaha idaha. Adhijirro badan ayaa u muuqday inay doorbidayaan eeyaha madow, laakiin tani waxay u badan tahay inay ka fudud yihiin in lagu dhex arko adhiga. Puli wuxuu ahaa eyga dhaqashada iyo quudinta, oo lagu qiimeeyo laydhkiisa, dhaqaaqa dhaqaaqa halka kan weyn ee reer Hangari, Komondor , waxaa badanaa loo isticmaali jiray eey ilaalin ah adhiga. Xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, noocyadu waxay ku sigteen inay dhintaan oo tiradooda waxaa laga dhigay laba tirooyin. Laakiin barnaamijka taranka ee la xakameeyey oo ay gacan ka geysteen kuwa ku takhasusay adduunka oo dhan ayaa hubiyay badbaadada kuwaan yar ee u gaarka ah Hungary. Puli waxaa aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1936.
Tani waa UK iyo USA Ch. Prydain Potpourri oo jooga Rockisland. Lahaanshaha sawirka Rockisland Puli
B.O.B. Ku guuleystihii Crufts sanadkii 1999 halkaas oo uu ku qaatay kiisii ​​3aad. c.c. isaga oo maalin ka dhigaya horyaal! Lahaanshaha sawirka Rockisland Puli. Aad ayaan ugu mahadnaqayaa Elizabeth Williams macluumaadka ku yaal boggan.
Kani waa Merlin aka Rockisland Pied Piper, oo ah cunug Puli qurux badan. Lahaanshaha sawirka Rockisland Puli
meeqa eeyo saafi ah ayaa jira
Naopleon the Hungarian Puli oo 8 jir ah — Sawirka waxaa iska leh David Hancock
Naopleon the Hungarian Puli oo 8 jir ah oo xawaare sare ku socda — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Naopleon the Hungarian Puli oo 8 jir ah oo la ciyaaraya eey kale — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Naopleon the Hungarian Puli — Sawirka waxaa iska leh David Hancock
Eeg tusaalooyin badan oo ah Puli
Sawirada Nents 1
Nents Sawirada 2
kala badh jarmal adhijir badh chow
Lucas Terrier eeyo yaryar oo iib ah
timo dhaadheer dachshund jack russell mix
buluug mareykanka sanka buluug god
king charles cavalier iyo iskutallaabta poodle